नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धुलिखेलमा, अहिलेको सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई खत्तम बनाउन अध्यादेश दियो - KavrePress
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धुलिखेलमा, अहिलेको सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई खत्तम बनाउन अध्यादेश दियो
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २३, २०७८ समय: १९:५६:४६
काभ्रेपलाञ्चोक । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारलाई अलच्छिनाहरुको संज्ञा दिनुभएको छ ।
ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रति लक्षित गर्दै कडा टिप्पणी समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भनेको के हो ? कृष्णप्रसाद सापकोटा, बलराम सापकोटाको जिम्मा लिने कि नलिने ? यो जिम्मा लिन्छु भनेको के हो ? सभामुख भएर गिच्च दाँत देखाउने हो ?ओलीको प्रश्न थियो ।
वर्तमान सरकारलाई डरपोक र काँतर भन्दै ओलीले एउटा नागरिकलाई तार काटेर खोलामा हारेर मार्दा समेत यस्तो भयो कारबाही गर भनेर भन्न नसकेको बताउनुभयो । ‘डराउने जन्तु पनि कुइकुई त गर्छ नि यो त कुइकुई पनि गर्दैन कति साह्रो काँतर बनेको ’ ओलीको भनाई थियो ।
ओलीले नेपाली काँग्रेसले चुच्चे नक्सा पास गर्ने बेलामा संसद्मा लत्रिए पनि महाधिवेशनमा चुच्चे नक्सा हराएर बुच्चे नक्सा टासेको बताउनुभयो । ‘महाधिवेशनमा काँग्रेसले आफ्नो भूभाग काटेर टास्यो , सारा मिडियाले लेख्दा समेत काग्रेंसले गल्ती भो सम्म भन्दैन । काग्रेंसको राष्ट्रियता देखियो ’। ओलीले भन्नुभयो । अपडेट खबर बाट